Komishanka doorashooyinka waxa iyaga looga fadhiyaa marka ugu horaysa in ay cadeeyaan oo si faahfaahsan u qeexan in wakhtiga u hadhsani uu ku filan yahay | Somaliland One
Komishanka doorashooyinka waxa iyaga looga fadhiyaa marka ugu horaysa in ay cadeeyaan oo si faahfaahsan u qeexan in wakhtiga u hadhsani uu ku filan yahay
January 9, 2017 - Written by Wararka Maanta
Aniga waa suurtogal inu war iga dhiman yahay waayo Komishanka Doorashooyinka waxa khuseeya oo ay masuul ka yihiin awoodda ugu saraysana iyagu leeyihiin waa doorashada inay wakhtigeedii ku qabtaan. Arimaha kale ee doorashada saamayn ku yeelan kara waxay ku yeelan karaa waa taalo. Imika waxan ka dareemay hadalka Maxamed Cali Bile in Komitionku ay cadeeyeen in wax waliba uu diyaar u yahay oo iyagu dhinacooda ay ku qaban doorashada wakhtigeedii. Hadii ay sidaasi run tahay yaa ku amri kara in aanay doorashada qabanin dhinaca sharciga? anigu ma ogi. Laakiin ma laga yaabaa in iyaga ay jiraan wax qabyo ka ah laakin aanay doonayn in ay qirtaan ee abaarta oo iyaga aan shaqo u taala ahayn ay doonayaan inay goldalooladooda ku daboolaan?
Komishanka doorashooyinka waxa iyaga looga fadhiyaa marka ugu horaysa in ay cadeeyaan oo si faahfaahsan u qeexan in wakhtiga u hadhsani uu ku filan yahay sidaa daraadeedna ay doorashada wakhtigeedii ku qabanayaan iyo in wakhtigu cidhiidhi ku yahay oo ay u baahan yihiin wakhti dheeraad ah oo cayiman,
Arinta abaarta cidda uu u yaal go’aankeedu iyaga(K0mishanka) maaha sharcina uma lahaa. Ilaa hadana cid xaq u leh inay tidhaa dib u dhiga doorashada oo ku tidhina ma jirto. Lakiin anigu waxan ka shakisanahay in ay run tahay in Komishanku uu farsamo ahaan diyaar u yahay in doorashada uu wakhtigeedii ku qaban karo, Xataa hadii ay ku qaban karaan balse abaartu tahay sabab dib loogu dhigi karo doorashada dabcan maaha inta dib loogu dhigi karaa wakhti ka badan int uu dalka oo dhan roobabka gugu ka curanayo. Markaana waa dhamaadka bisha April ama ugu dambayna bisha May gudaheeda. Waa hadii sife sharci ah dib loogu dhigayo iyada oo la tixgelinayo abaarta. Hadii roobabkii guga oo da’y abaartina jabtay aan doorashona qabsoomin taa macnaheedu wuxu noqonayaa in abaarta cudur daar uun looga dhiganayo ee waxa la diidn yahay uu yahay in doorasho ay qabsoonto taasina hooga Somaliland wax kaga sii dhaca mooyaane wax ugu kordhayaa ma jiro dawladnimada Somalilandna waxaba saarmi kara sua;aal. Markaa hadii aynaan doonayn dawladnimo dee aan qudhunkeen iska walaaqanno oo yaynaan isugu sheekayn in ayno qarnimo iyo dawladnimo doonayno sanad iyo laba iyo intii la doonan ha la kordhiyo oo inta joogtaa ha iska joogto intii ay karayaan.
By Mujaahid Cali Guray